သွားပိုးစားခြင်းက ကူးစက်တတ်သလား? | ဆန်းသစ်မြန်မာ
Home Lifestyle Health သှားပိုးစားခွငျးက ကူးစကျတတျသလား?
သှားပိုးစားခွငျးဆိုတာက သှားတှမှော ကပျငွိနတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကွေောငျ့ ဖွဈရတာဖွဈပွီး နောကျဆုံးစားကွှငျးစားကနျြတှကေ သှားတှမှော ကပျငွိကာ ပေါကျဖှားတတျပါတယျ။ ဒီဘကျတီးရီးယားတှကေ အကျဆဈတှကေို ထှကျစပွေီး သှားတှကေို တိုကျစားစပေါတယျ။
သှားပိုးစားတဲ့ မိဘကနေ ကလေးငယျဆီ အစာတှကေို ကွိတျဝါးကြှေးရာကတဆငျ့ ၊ အစားအစာပူ၊ မပူ အရငျ မွညျးငုံကြှေးရာက တဆငျ့ သှားပိုးစားတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ ကူးစကျစနေိုငျကွောငျး လလေ့ာမှုတှကေ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘဝအဖျောတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နမျးရှုပျရာကနလေညျး သှားပိုးစားစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ကူးစကျစနေိုငျကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
လလေ့ာမှုတဈရပျအရ အရငျတုနျးက တဈခါမှ သှားပိုးစားခွငျးမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အသကျ ၄၀အရှယျအမြိုးသမီးတဈဦးဟာ အမြိုးသားတဈဦးနဲ့ ခဈြကွိုကျသှားပွီး သှားပိုးစားရောဂါရခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးအောငျ တဈနမှေ့ာ အနညျးဆုံးနှဈကွိမျ သှားတိုကျဖို့နဲ့ သှားပှတျကွိုးသုံးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သငျ့အဖျောဆီကလညျး သှားပိုးစားတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုး ကူးစကျမခံရအောငျ သငျ့အဖျောကိုလညျး သှားကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျဖို့ တိုကျတှနျးပေးပါ။
Zawgyi Font : သွားပိုးစားခြင်းက ကူးစက်တတ်သလား?
သွားပိုးစားခြင်းဆိုတာက သွားတွေမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးစားကြွင်းစားကျန်တွေက သွားတွေမှာ ကပ်ငြိကာ ပေါက်ဖွားတတ်ပါတယ်။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက အက်ဆစ်တွေကို ထွက်စေပြီး သွားတွေကို တိုက်စားစေပါတယ်။
သွားပိုးစားတဲ့ မိဘကနေ ကလေးငယ်ဆီ အစာတွေကို ကြိတ်ဝါးကျွေးရာကတဆင့် ၊ အစားအစာပူ၊ မပူ အရင် မြည်းငုံကျွေးရာက တဆင့် သွားပိုးစားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ကူးစက်စေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘ၀အဖော်တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နမ်းရှုပ်ရာကနေလည်း သွားပိုးစားစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကူးစက်စေနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အရင်တုန်းက တစ်ခါမှ သွားပိုးစားခြင်းမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အသက် ၄၀အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ချစ်ကြိုက်သွားပြီး သွားပိုးစားရောဂါရခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ် သွားတိုက်ဖို့နဲ့ သွားပွတ်ကြိုးသုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အဖော်ဆီကလည်း သွားပိုးစားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်မခံရအောင် သင့်အဖော်ကိုလည်း သွားကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါ။
Previous article နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျခဲ့သျောလညျး အိမျအပွနျလမျးခွောကျကပျခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့စဈတုရငျ ခနျြပီယံ ဝငျးထှနျး
Next article မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲသူမြားကို ထောငျဒဏျအစား လူမှုရေးပွဈဒဏျအဖွဈ အစားထိုးမညျ